iPhone Video Ntụgharị - tọghata Video ka The New iPhone 5 na All iPhones
Olee otú iji tọghata AVI / MP4 / MKV / WMV / DivX / FLV ka iPhone (6 / 6s gụnyere)
Ọ bụrụ na ị nwere ike ghara igwu egwu nkiri na iPhone, i kwesịrị ịma banyere 3 ihe, iPhone akwado video formats, video encoders, na iPhone oru nkọwa. Ọ bụrụ na otu n'ime ndị 3 adabaghị na gị iPhone, ị nwere ike ghara igwu egwu a video ọma na iPhone. Isiokwu a na-ahụ nke a mgbe na-enye dị mfe ngwọta gị iPhone video playback nke na ụfọdụ ọkachamara video converters.
Part 1: 3 Online iPhone Video converters
Nkebi nke 2: workaround - 8 Desktọpụ Video converters
Nkebi nke 3: iPhone akwado Files
Nkebi nke 4: FAQs banyere igwu Videos on iPhone
1. Free Online Video Ntụgharị (Online video Ntụgharị)
2. Online-tọghatara (Online video Ntụgharị)
Ị nwere ike iji Online-tọghatara onwe tọghata faịlụ online. Uru nke na-eji ihe online iPhone video Ntụgharị bụ na ị na-adịghị mkpa iji wụnye a-atọ ndị ọzọ software na kọmputa gị, na nwere ike inwe ezigbo ọmụma nnọọ conveniently. Otú ọ dị, ya akakabarede ọsọ-apụghị jiri ya tụnyere a desktọọpụ video Ntụgharị. Ọ nwere ike na-ewe gị awa rụchaa converting a nnukwu faịlụ.
3. Zamzar (Online video Ntụgharị)
Zamzar dị ewu online iPhone video Ntụgharị. I nwere ike dị mbubata gị faịlụ, na ahụ setịpụrụ mmepụta formats dị ka iPhone, ma ọ bụ MP4 na MOV. N'ikpeazụ, ị pụrụ ịmalite iji tọghata. Otu ihe mkpa ka ị mara bụ na gị na isi iyi faịlụ kwesịrị erughị 100 MB na akakabarede ọsọ pụrụ ịbụ nnọọ ngwa ngwa.
Nkebi nke 2: workaround - 8 Desktọpụ Video converters ka tọghata ọ bụla Video on Mac / Windows ka iPhone Video Formats
1. breeki aka (Windows & Mac)
Iji tọghata nkiri na iPhone, ị nwere ike ina malitere na breeki aka site n'ịhọrọ kachasị preset maka iPhone, ma ọ bụ nanị ịtọ mmepụta format dị ka MP4, H.264 ma ọ bụ MPEG-4. Mgbe ahụ ị pụrụ ịnụ ụtọ elu àgwà akakabarede na ngwa ngwa ọsọ.
Nke a iPhone video Ntụgharị akwado converting videos ka MP4 (.M4V) na .MKV. Na-akwado video encoders bụ H.264 (x264), MPEG-4 na MPEG-2 (libav), wdg Ị nwere ike mfe tọghata ọ bụla video ka iPhone (iPhone 5s / 5c / 5 gụnyere) on Mac na Windows.
Ọ bụ ọkachamara na zuru ezu video akakabarede toolbox na ọrụ nke converting, edezi, nbudata, na-ere ọkụ DVD, Ndekọ na ndị ọzọ. Key atụmatụ bụ:
Tọghata AVI, MP4, MOV, mpg, MKV, WMV, DivX na ndị ọzọ na-iPhone (iPhone 5s / 5c / 5 gụnyere).
Kachasị presets maka Apple ngwaọrụ dị iche iche na iPhone na iPad ụdị, dị ka iPhone 5 (s), iPhone 4, iPad Air, wdg
Dezie videos dị ka QuickTime Pro site trimming, cropping, n'usoro n'usoro, na-agbakwunye mmetụta, wdg
Download vidiyo si na Netflix, YouTube, Facebook, wdg na kasị ọsọ.
Nyefee converted faịlụ site na WiFi.
MPEG StreamClip bụ a cross-ikpo okwu iPhone video Ntụgharị, ọkpụkpọ, na nchịkọta akụkọ ma Windows na Mac. Ị nwere ike iji ya iji tọghata MPEG, VOB, MOD, MOV, AVI, MP4, TS, M2T, na ndị ọzọ ka gị na iPhone (na-agụnye 5s / 5c / 5) akwado formats na wuru na-presets. E wezụga, i nwere ike iji nke a iPhone video Ntụgharị dezie gị video na Cut, Detuo, Paste, na ewepụtụ. Ihe ọzọ bụ na MPEG StreamClip na-ahapụ gị ibudata vidiyo si na YouTube na Google.
Video Converter Free Bụ ihe ọzọ na iPhone video Ntụgharị na sara mbara format nkwado. Ị nwere ike iji ya iji tọghata fọrọ nke nta ọ bụla faịlụ gị iPhone n'ihi na mma playback ahụmahụ. Ka ihe atụ, ị nwere ike tọghata AVI ka iPhone, MP4 ka iPhone, MKV ka iPhone, MOV ka iPhone, WMV ka iPhone, DivX ka iPhone, mpg ka iPhone, VOB ka iPhone na ndị ọzọ. Ọzọkwa ọ na-ahapụ gị welie vidiyo na ndị ọgaranya video edezi ọrụ.
Dị nnọọ mbubata ọ bụla nke gị videos dị ka AVI, MKV, MOV, MP4, na VOB a iPhone (na-agụnye 5s / 5c / 5) video Ntụgharị, wee họrọ nhọrọ "Kachasị maka iPod", wee pịa "tọghata" button . Ị nwere ike ịrụcha video akakabarede na a ngwa ngwa usoro. Ọzọkwa a iPhone video Ntụgharị akwado ogbe video coversion.
Akwado formats: .mov .mp4 .avi .dv .mpg .vob .3gp .asf .wmv .flv .m4v
6. AVS Video Ntụgharị (Windows)
Ị pụrụ irite uru a otutu site na nke a dị ike iPhone video Ntụgharị. Ọ na-ahapụ gị tọghata AVI ka iPhone, MP4 ka iPhone, MOV ka iPhone, WMV ka iPhone, MKV ka iPhone, mpg ka iPhone, VOB ka iPhone, M4V ka iPhone, WAV ka iPhone, WMA ka iPhone, wdg ọzọ i nwere ike tọghata gị vidiyo na ngwaọrụ na kachasị presets dị ka iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod.
Ọzọkwa o nwere ndị ọzọ. Ị nwere ike iji ya jikwaa HD-Igwefoto vidiyo site n'ịtụgharị ya ọ bụla nke gị chọrọ formats, ike DVD, na ịkọrọ gị videos weebụ, wdg
7. Freemake Video Ntụgharị (Windows)
Freemake video Ntụgharị nwere a doro nnọọ anya ma dị mfe interface. Ọ na-akwado converting videos iche iche formats na ngwaọrụ. Ị nwere ike mbubata 200+ ọsọ ọsọ formats, video, audio, DVD, ma ọ bụ foto a iPhone video Ntụgharị. Na mgbe ahụ, ị ​​nwere ike tọghata gị video faịlụ ka iPod, iPhone, iPad, PSP ma ọ bụ Android. Ọzọkwa ị nwere ike iji ya dezie videos, download videos ma ọ bụ mee foto ngosi mmịfe.
Ọ bụ nnọọ ewu ewu iPhone video Ntụgharị n'etiti ọtụtụ Windows ọrụ. Ọ nwere ike tọghata gị niile video na ọdịyo faịlụ ka ngwaọrụ mkpanaaka (iPhone, iPad, ma ọ bụ Android), console (PS3, Xbox 360 na PSP) ma ọ bụ na-ere ọkụ DVD maka playback on a ibu ihuenyo. Ọ atọghata gị niile MP4, FLV, AVI, MKV, M4V, WAV, MP3, WMA, wdg faịlụ ka iPhone. Niile isi formats akwado. Ọzọkwa ọ na-ahapụ gị gbawara n'etiti music si na fim.
I. akwado iPhone Video Files
iPhone akwado Video Formast MOV, MP4, M4V
iPhone unsupported Video Formats AVI, FLV, mpg, MPEG, WMV, 3GP, VOB, MTS, MKV, 3G2, 3GPP, TS, TP, TRP, M2TS, DV, MOD, ASF, DAT, F4V, RM, RMVB, DivX, OGV, VRO, MXF.
iPhone akwado Video Encoders H.264, MPEG-4
iPhone akwado oru nkọwa
H.264 video ruo 720p, 30 okpokolo agba kwa abụọ, Main Profaịlụ larịị 3.1
Audio: AAC-LC ruo 160 kbps, 48kHz, stereo
MPEG-4 video, ruo 2.5 Mbps, 640 site 480 pikselụ, 30 okpokolo agba kwa abụọ, Mfe Profaịlụ
Audio: AAC-LC ruo 160 kbps kwa ọwa, 48kHz, stereo
The ọsọ ọsọ video faịlụ akwado maka playback na gị dị iche iche iPhones dị ka iPhone 5S, 5C, 5, 4S, na 4 bụ dị ka e depụtara n'okpuru ebe a:
M4V, MP4 na MOV containers na H.264 video codec na AAC audio codec,
M4V, MP4 na MOV containers na MPEG-4 video codec na AAC audio codec,
AVI containers na M-JPEG video codec na PCM audio codec,
AVI containers na M-JPEG video codec na ulaw audio codec.
II. Best Video Setting maka dị iche iche ụdị nke iPhone 5S, 5C, 5, 4S, na 4
The MP4 akpa na H.264 video codec na AAC codec bụ ihe kasị mma video ọnọdụ. Biko ahụ nkọwa ndị ọzọ ka ndị ọzọ na ntọala ka ndị na:
Mkpebi: 1136 * 640 (n'ihi na iPhone 5S / 5C / 5), 960 * 640 (n'ihi na iPhone 4S / 4)
ụba Rate: 30 fps
Bit ọnụego: 2500 kbps
Sample ọnụego: 48000Hz
Ọ bụrụ na gị video na-adịghị iPhone akwado ma ọ bụ na ị na-ejighị n'aka na nke kasị mma video ọnọdụ maka gị iPhone (5S / 5 / 4S / 4 gụnyere), ị pụrụ iji a video Ntụgharị iji dozie nsogbu gị. Na video Ntụgharị n'okpuru, ị pụrụ nanị họrọ preset mmepụta format maka ngwaọrụ gị na-enweghị ka ịhazie video si ọnọdụ aka.
Nkebi nke 4: FAQs banyere igwu Videos on iPhone (na-agụnye 5s / 5c / 5)
1. Ntak apụghị m na-ekiri fim (MP4, AVI, MKV, MOV, M4V, FLV, mpg, wdg) on ​​iPhone
iPhone akwado video na MP4, MOV, M4V formats na H.264, ma ọ bụ MPEG-4 codec. Ọ bụrụ na gị nkiri bụ na iPhone akwado format, o nwere ike ka na-adịghị na-egwuri site iPhone. The iPhone oru nkọwa kwesịkwara-atụle. Ị nwere ike iji iPhone video Ntụgharị na mmepụta presets ka mfe tọghata video ka iPhone (iPhone 5s / 5c / 5 gụnyere) on Mac na Windows.
2. Ntak apụghị m na-ekiri video na nchọgharị na weebụ (Safari, Chrome, ma ọ bụ Firefox) on iPad
Kasị videos agbakwunyere na web bụ flash videos. iPhone anaghị akwado na-akpọ flash video. Ma i nwere ike iji ụfọdụ Flash Player Browsers na-ekiri flash videos, dị ka Puffin nchọgharị, Photon Flash ọkpụkpọ, ma ọ bụ Skyfire nchọgharị na weebụ.
3. Ike egwu YouTube video na 360p ma ọ bụ 480p
iPhone akwado akpọ vidiyo na 720p. Ị nwere ike ịtọ họọrọ video àgwà na-720P n'okpuru video playback ntọala.
iPhone Video Cropper: Olee otú akuku iPhone Video
Olee otú iji tọghata WMV ka iPhone (iPhone 5 / 5s gụnyere)
Olee otú iji tọghata AVI ka iPhone 5S / 5 / 4S na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
Olee otú Download MP4 Movies
Olee otú iji tọghata MP4 ka iPod Video ọsọ ọsọ na mfe
Olee otú iji tọghata Text ka EPUB ebook
9 Easy Excel Videos on YouTube Ịmụta Excel ngwa ngwa
Top 8 Audacity Tutorial Videos on YouTube
Olee otú iji tọghata MP4 ka QuickTime MOV (Yosemite gụnyere)?
> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata Video ka iPhone